Abantu abasha abafisa ukuzuza wokuya ocansini kukammangali, babuzwe mayelana indlela ukumpotopotoza intombazane. Isihloko kanye isihloko lesi sihloko.
Uma umuntu efuna ukuba ngesikhathi ibambene kusihlwa nobulili kumele kuqale hhayi embhedeni. Abesifazane kufanele waphumula. Futhi amnike ithuba ezinjalo ngemva umsebenzi kungenziwa wokunakekela kwakusihlwa. Mhlawumbe kuyoba dinner esitolo sokudlela, kodwa ungakwazi - ehlanganisa ikhompuyutha kanye nokulalela ithebula ahlotshiswa.
Uma idina sesiphumile, owesifazane ekhululekile, ungakwazi udlulele usofa. Ungathuli - khuluma. Futhi ukukhuluma ikakhulukazi ngaye - sypte izincomo, kodwa ngaso sonke isikhathi ngobuqotho, bonisa isithakazelo ezindabeni zayo. Owesifazane ukulalela, ungakwazi udlulele esenzweni - kuwukuziphulula izingalo, emuva, ukunikela massage.
Kodwa yini ushukumiseleka embhedeni. Indlela ukumpotopotoza intombazane?
Uma wenze konke ngendlela efanele, i-intombazane yena yayicindezele wena, bese ungaya ngqo uchakide. Kufanele uqale nge touch ezithambile entanyeni, ngemuva ekhanda futhi izinwele. uthando olunjalo zithandwa kakhulu amantombazane, ngoba kulezi zindawo babe inqwaba kwalapho kuhlangana khona imizwa.
Entanyeni nentamo, ungaya kumuntu - kukhona okuningi nezinezimo erogenous. Futhi izindawo abangothathekile uthathwa izindlebe, iminwe, ngemuva intombazane esiswini inkaba, kwamathanga kwangaphakathi. Kodwa ukuzwela esiphezulu has a touch mnene webele sowesifazane.
Ngokuvamile, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi ezifweni okusezingeni eliphezulu isikhumba ezindaweni shintsho ulwelwesi: emaphethelweni emakhaleni, izindebe umngcele, egumeni, njll Kakhulu game ethokozisayo ngokuthi "indiza butterfly", okushiwo okuyinto Weasel eyelashes wakhe.
Kodwa waya esifubeni. Ngo inqubo izitho ukuzwela yakhe luyanda kaningi. Indlela ukumpotopotoza owesifazane esifubeni? Qala nge ayiphulule ulimi ebe egxile hhayi nje ngokwethukela ingono, kodwa futhi elibazungezile. Uma izingono pat ngeminwe yakho, uzoqaphela umphumela ezithakazelisayo, okubonisa enkulu injabulo intombazane - ingono ukwakhiwa. Ebhekisela esifubeni, kumelwe kukhunjulwe ukuthi le ndawo ebucayi kakhulu futhi kudingeka ukumpotopotoza yakhe ngobumnene kakhulu. ukunyakaza Rough ngeke kuholele nomphumela ohlukile - injabulo iphele. Futhi awubizi mali esifubeni wayichoboza noma bite.
Kusukela esifubeni ukuba kancane kancane ukuhambisa ephansi, esondela umzimba female obucayi kakhulu. Indlela ukumpotopotoza ntombazane sangasese? Le nqubo futhi kudinga ulwazi oluthile, kodwa iseluleko main - ungathinti clitoris unexcited. Izenzo ezinjalo kungabangela kabi ngisho ubuhlungu. Lapho kuwukuziphulula le umthondo yowesifazane kudingeka ezihlukahlukene, ngoba ukuphinda ayiphulule efanayo ngeke zinenani okunenjongo. Lokubaluleke kakhulu kukhona ukuhlanganyela ubulili ngomlomo.
Oral sex - indlela esheshayo ukuletha intombazane ukuba eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili. Indlela ukumpotopotoza ntombazane umthondo? Kukhona iinkhundla eziningana, ofanele kakhulu ubulili bomlomo:
- intombazane ilele emuva kwakhe, futhi umlingani itholakala phakathi kwemilenze yakhe;
- Intombazane ethile eyayihleli onqenqemeni kombhede noma esihlalweni, futhi umlingani kuhlelwe phambi kwakhe ethangeni lakhe;
- isikhundla 69.
Ilungiselelo yokugcina ayilingani konke, ngoba ngaso sonke isikhathi intombazane singagxila ngesikhathi cunnilingus fellatio.
Cunnilingus kuhle ukuqala ne lula kissing the clitoris futhi labia. Lokubaluleke kakhulu kuyinto hydration we clitoris, noma intombazane ingase abayithandi. Lasky baqhubeka elithambile, ukunyakaza ngokucophelela ulimi. Lapho kudlula kule ndawo lwesitho sangasese sowesifazane, ayikwazi kungagcini - kule ndawo akuyona ngakho nozwelo isenzo.
Ukuwotawota umthondo zesifazane neminwe can, uma Lubrication ngokwanele. Nokho, wamgwaza sangasese akudingekile - abesifazane ungathandi ukuthi, le nqubo lihlotshaniswa reception kwabo udokotela wezifo zabesifazane.
Sithemba ukuthi sizobe ukuphendula ngokugcwele umbuzo indlela ukumpotopotoza intombazane, sekuyisikhathi uqhubekela umkhuba.
Uyithola kanjani i-orgasm?
Broken Ubudala: ukuhamba. Broken Ubudala: uMthetho 2: ukudlula
"Scud" - rocket elinamandla uthi futhi zamaphekula?
Amazing Inkohliso Optical: zisebenza kanjani
Palestine sidilizwa: umlando, amasiko kanye namasiko. IFenike yasendulo futhi Palestine